Hordhac: Czech Republic vs Turkey: Xulka Jamhuuriyadda Czech Oo Rajeynaya Booska Sadexaad | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Hordhac: Czech Republic vs Turkey: Xulka Jamhuuriyadda Czech Oo Rajeynaya Booska Sadexaad
Hordhac: Czech Republic vs Turkey: Xulka Jamhuuriyadda Czech Oo Rajeynaya Booska Sadexaad
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 21-06-16 8:28 AM Xulka Czech Republic ayaa wajihi doona xulka Turkey ciyaartooda ugu dambeysa ee Group D tartanka Euro 2016, iyadoo labadaan xul ay raadinayaan inay qaab qariib ah ugu soo baxaan wareega 16ka ee tartankaan.
Xulalka Kulmaya: Czech Republic vs. Turkey
Saacadda Kulanka: 10pm (Xilliga Geeska Africa)
Garoonka Kulanka: Stade Bollaert-Delelis
Ciyaaraha Wareega 3aad Group D – Euro 2016
Xulka Turkey ayaa laga yaabaa inay ciyaaraan kulankoodii ugu dambeeyey ee tartanka Euro 2016 ka dib guuldarradii 3-0 aheyd ee ay kala kulmeen xulka Spain. Wiilasha tababare Fatih Terim ayaa ku guuldarreystay inay shabaqa soo taabtaan 190 daqiiqo oo ay ciyaareen bandhigga Faransiiska.
Inkastoo labadaas guuldarro oo xiriirka ah ay la kulmeen, Turkiga ayaa weli usoo bixi kara wareega 16ka tartankaan iyagoo ka mid noqonaya afarta xul ee ugu dhibcaha badan xulalka kaalinta seddaxaad ee usoo gudbi doona wareega bugbaxda laakiin waa keliya haddii ay garaacaan xulka Czech Republic caawa oo Talaado ah.
Dhanka kale xulka Czech Republic ayaa waxoogaa ka niyad wanaagsan xulka Turkey ka hor kulankaan marka loo fiirsho usoo bixitaanka wareega 16ka Euro 2016 sababtuna waxay tahay inay durba shaqeysteen hal dhibic ka dib barbardhicii 2-2 ahaa ee ay Jimcadii la galeen xulka Croatia.
Xulka tababare Pavel Vrba ayaa iska soo magay laba gool oo looga hormaray kulankaas si ay u shaqeystaan dhibicdoodii ugu horreysay ee Euro 2016. Laakiin waa inay badiyaan ciyaartaan weliba farqi laba gool ama wax ka badan ah si ay uga sarre maraan xulka Croatia isla markaana ay ugu dhammeystaan kaalinta labaad ee safkaan iyagoo rajeynaya inay Isbaanishku ka badiyaan Croatia.
Xulka Czech Republic ayaa heysta fursad kale oo ay ugu soo bixi karaan ciyaaraha wareega 16ka ee tartankaan waana inay ka mid noqdaan xulalka ugu dhibcaha wanaagsan kaalinta seddaxaad.
Czech Republic ayaa dhabarjab weyn la kulantay kulankoodii ugu dambeeyey ka dib markii daaha laga qaaday inuu soo dhammaaday waqtigii tartanka Euro 2016 ee kabtankooda Tomas Rosicky.
Inkastoo uu dhaawacaan qabo xiddigii hore ee Arsenal ayaa sii joogi doona dalka France si uu u taageero xulkiisa, laakiin ka maqnaanshiyihiisa garoonka ayaa dhabarjab weyn ku ah xulkaan oo doonaya inay qaataan seddaxdoodii dhibcood ee ugu horreysay tartankaan.
Marka laga tago dhaawaca Rosicky, Czech Republic ayaa heysta koox dhammaan taam ah oo ay kasoo xushaan shaxdooda ugu adag inkastoo ay welwel ka qabaan inay ganaaxyo wajihi karaan ciyaartooy muhiim u ah, iyadoo David Limbersky iyo Tomas Sivok ay hal jaalle u jiraan inay ganaax hal kulan ah wajahaan.
Dhanka kale, Turkey ayaa heysta Burak Yilmaz, Cenk Tosun, Hakan Balta, Ozan Tufan iyo Volkan Sen oo dhammaantood halis ugu jira inay wajahaan ganaax hal kulan ah. Laakiin waxay u baahan yihiin inay u dagaalamaan booskooda wareega 16ka Euro 2016 ka hor inta aysan ka welwelin ganaaxa ciyaartoydooda.
Labadaan xul ayaa foodda isdaray intii lagu jiray ciyaarihii isreebreebka tartankaan. Labadaas lugood xul kasta ayaa gaaray guul marti ah.
Labadaan xul ayaa kulmaya markoodii labaad seddax tartan oo Koobka Qaramada Qaaradda Yurub ah. Bandhiggii Euro 2008 labadaan xul waxay ku wadajireen Group A waxaana kulankaas lagu xusuustaa inuu Turkigu sameeyey mid ka mid ah soo laabashadii ugu xusuusta badneyd taariikhda kubadda cagta.
Laba gool oo uu dhaliyey Nihat Kahveci seddax daqiiqo gudahood ayaa Turkey ka caawiyey inay guul 3-2 ah ka gaaraan xulka Czech Republic kuwaasoo xilli hore isaga haray bandhiggaas.
Si kastaba ha ahaatee, afar kuan oo dhexmaray tan iyo bandhiggiii Euro 2008, labadaan xul ayaa min laba guul kala gaaray.
Czech Republic (4-2-3-1): Cech: Kaderabek, Hubnik, Sivok, Limbersky: Plasil, Selassie, Krejci, Daida, Skalak: Skoda
Turkey (4-3-3): Babacau: Baita, Gonul, Topal, Caner, Erkin: Selcuk, Ozyakup, Tufua: Yilmaz, Arda, Sahin